एक नेपालीका ससुरा हुन् जापानका प्रधानमन्त्री ! थाहा पाउनुहोस् को हुन् त्यी नेपाली: – Taja Khawar
एक बर्षपछी छोरीहरुसँग बोल्दा भ’क्का’नि’इ’न् आमा, श्रीमानलाई डि’भो’र्स दिने निर्णय(भिडियो हेर्नुस)
बन्दना भन्छिन्, खानामा थु किदिने,मा तेर पि साब फे रिदिने,खुट्टा धुएको पानी खुवाउन लगाउने गर्थ्यो, छोराछोरी हुर्केर बुझ्ने हुन्छन्,म उनीहरूलाई यसको काल बनाउँछु(भिडियो हेर्नुहोस्)
माईमा मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट एक युवाको मृत्यु
१६ पुसदेखि हराइरहेकी महिलाको श’व घरभित्रै फेला…श्रीमतीकाे ह’ त्या गरी घरभित्र श’व पु रेर फरार …
एक नेपालीका ससुरा हुन् जापानका प्रधानमन्त्री ! थाहा पाउनुहोस् को हुन् त्यी नेपाली:
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ समय: ११:५१:१३
एक नेपालीका ससुरा हुन् जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री ! थाहा पाउनुहोस् को हुन् त्यी नेपाली:
यही हप्ता जापानले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो । लिबरल डेमोक्रयाटिक पार्टीका योशिहिदे सुगालाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेको सुगाले नयाँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए ।
निबर्तमान प्रधानमन्त्री सीन्जो आवेका बिश्वास’पात्रका रुपमा रहेका सुगा पार्टीका दुई तिहाइ नेताको समर्थनमा प्रधा’नमन्त्री उम्मेद्धार सिफारिस भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको दौडमा फुमि’यो किसिदा, पूर्व रक्षामन्त्री सिगेरु इसिवा रहेका थिए । धेरैलाई थाहा नभएको तथ्य जापानका नयाँ प्रधा’नमन्त्री एक नेपालीको नातामा सम्धी पर्दछन् ।
जापानका प्रधानमन्त्री सुगा
उनी जापानमा रहेका नेपाली व्यबसायी तथा एनआरएनका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टका श्रीमतिका काका हुन् । भट्टका काका ससुरा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली’का एक ससुरा जापान’को प्रधानमन्त्री बने ।
भट्टले जापानी चेली मियको लाई विवाह गरेका छन् । उनीहरुका दुई छोरी समेत रहेका छन् । जापानजस्तो शक्तिशाली देशको प्रधानमन्त्री एउटा नेपाली’को नाता’गोतामा पर्नु आँफैमा महत्वको बिषय भएको नेपाली बृत्तमा चर्चा छ । सुगा श्रीमती मि’यको भट्टको साख्खै काका हुन् ।
सुगासँग भट्टको व्य’क्तिगत सम्बन्धका कार’ण यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ । डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै भट्टले सुगा आफ्नी श्रीमती’का काका पर्ने भएको पुष्टि गरे । यसअघि सुगा गृहमन्त्री भएका बेला भट्टले उनलाई प्रत्य’क्ष रुपमा भेटेका पनि थिए ।
सुगा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाललाई के फाइदा होला भन्ने डिसीनेपालको प्रश्नमा भट्टले भने ‘उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा व्यक्तिगत रुपमा मलाई त धेरै नै खुसी लागेको छ ।
यसबाहेक ठूलो अर्थत’न्त्र भएको देश जापा’न, जसले नेपालसहितका देशहरुलाई सहयोग समेत गर्दै आएको छ, त्यहाँको प्रधानमन्त्री मेरो आफन्त नै पर्दा पक्कै पनि त्यहाँ’बाट प्राप्त हुने सहयोग बढ्नेछ । नेपालले अझै धेरै क्षेत्रमा लाभ दिन सक्नेछ ।’
जापानको सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले उनलाई नयाँ प्रधानमन्त्री छानेको छ । सोमबार भएको निर्वाचनमा सुगा प्रधानमन्त्री छानि’एका हुन् । सुगा यसअघि ८ वर्षसम्म क्याबिनेट सचिव पनि थिए । सुगालाई यसअघिका प्रधान’मन्त्री शिन्जो आबेका निकट मानिन्छ ।
Last Updated on: July 27th, 2021 at 11:51 am